”Soo mar Muqdisho!!” – DF Somalia oo wirif kale ku riddey Kenya! (Sabab?) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka ”Soo mar Muqdisho!!” – DF Somalia oo wirif kale ku riddey Kenya!...
”Soo mar Muqdisho!!” – DF Somalia oo wirif kale ku riddey Kenya! (Sabab?)
(Muqdisho) 29 Agoosto 2019 – Hay’adda Duulista iyo Saadaasha Hawada ee DF Somalia ayaa amar dul dhigtay diyaaradaha ka yimaada iyo kuwa ku socda Kismaayo oo lagu wargeliyay in wixii hadda ka dambeeya soo maraan Garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho, marka ay Kismaayo u socdaan.
Tillaabadan ayaa la sheegay inay DF Somalia ku micnaysay mid la xiriira hubinta iyo koontaroolka diyaaradaha ka dega Kismaayo, waana mid si ahaan looga jawaabayo amar la sheegay inuu beri dhowayd kasoo fuley dhanka maamulka Jubbaland, kahor intii aanay dhicin doorashada lagu muransan yahay ee Jubbaland.
Arrintan ayay DF sheegtay inay doonayso inay si dhow ugula socoto dayuuradaha soo gelaya hawada dalka oo ay dib maamulkeeda ula wareegtey Dowladda Soomaaliya, iyadoo muddo dheer laga maamulayay magaalada Nairobi.
Arrintan ayaa calwinaysa xaflad uu isku caleemo saarayo Axmed Madoobe oo dib loogu doortay doorasho weli lagu muransan yahay oo aysan u ducaynin DF Somalia iyo Beesha Caalamka, taasoo dalka qura ee soo dhoweeyay uu yahay Kenya oo faragelin cad ku haysey doorashadaasi, oo ay dhici karto inay qorshaynayeen inay wefdi usoo diraan Kismaayo.
Previous articleDHEGEYSO: Sweden oo keentay hindise cusub oo ay Soomaali badani ka faa’iidaysan karaan
Next articleXarunta dhaqanka Hargaysa oo lagu casuumey nin dhaqan-xumada u ololeeya!!